Xinhua Myanmar - မက္ကဆီကိုသမ္မတ နှင့် ပေါ်တူဂီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသမ္မတ Andres Manuel Lopez Obrador အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)	Social, Education & Health
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသမ္မတ Andres Manuel Lopez Obrador သည် COVID-19 ရောဂါ စစ်ဆေးမှုတွင် positive ရလဒ်တွေ့ရှိကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်က ၎င်း၏တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သမ္မတ Obradorက ၎င်းသည် ရောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်ကြောင်း နှင့် လက်ရှိတွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း တွစ်တာ၌ ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Joao Gomes Cravinho သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်သော COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရကြောင်း ၎င်း၏ ရုံးအဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဝန်ကြီး Cravinho သည် တစ်ဦးတည်းသီးခြားနေ၍ အဝေးမှ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
တူနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Othman Jerandi က ၎င်းသည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရကြောင်း လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်ကို တူနီးရှားပြည်တွင်း Mosaiquefm ရေဒီယိုက ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ဝန်ကြီး Jerandi က ၎င်းသည် COVID-19 လိုအပ်သော ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ခဲ့သော်လည်း ရောဂါကူးစက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ညသန်းခေါင်အထိ အချိန် ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၄၃၇ ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၇၅,၅၂၁ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်က တစ်ရက်အတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု ၁,၂၄၀ ဦးဖြင့် အမြင့်ဆုံး‌တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် နေ့စဉ် ကူးစက်မှုအသစ် ၅၀၀ ဦးခန့်ဖြင့် ၈ ရက်ဆက်တိုက် ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီးတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်က ပြည်တွင်းကူးစက်မှု ၁၁၇ ဦး နှင့် ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသော ကူးစက်မှု ၇ ဦးအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာသစ် ၁၂၄ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ယနေ့ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများအနက် ဂျီလင်တွင် ၆၇ ဦး ၊ ဟဲလုံကျန်းတွင် ၃၅ ဦး ၊ ဟဲပေတွင် ၁၁ ဦး ၊ပေကျင်းတွင် ၃ ဦး နှင့် ရှန်ဟိုင်းတွင် တစ်ဦး အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏ နေ့စဉ်အစီရင်ခံချက်က ဆိုသည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာသစ် ၄၆၉ ဦးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံအတွင်း အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၁၃၃,၇၆၇ ဦးထိ ရောက်ရှိလာကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွင်း အတည်ပြုလူနာ နောက်ထပ်သုံးဦးသေဆုံးခဲ့သဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းအထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၂,၀၆၆ ဦးထိရှိလာခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။(Xinhua)
LISBON -- Portuguese Defense Minister Joao Gomes Cravinho tested positive for COVID-19 with mild symptoms, his office announced on Sunday.
TUNIS -- Tunisian Foreign Minister Othman Jerandi on Sunday confirmed through social network his infection with COVID-19, local Mosaiquefm radio reported on Sunday.
Jerandi announced that he had contracted COVID-19 despite taking all necessary precautions and following health protocols.
Photo caption- Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador
Previous Article မတော်တဆမှုကြောင့် သတိမေ့မြောနေသော ချစ်သူကို စွန့်ခွာမသွားဘဲ သစ္စာရှိစွာ စောင့်ရှောက်ပေးနေသူ
Next Article တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခု၌ ပိတ်မိနေသူ ၁၁ ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့